လေနုအေး: သားနဲ့ ဘာသာပြန်
Posted by တန်ခူး at 11:35 PM
ရယ်လိုက်ရတာ ... သားသားက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ မ-ရယ်။
သူရိုးရိုးသားသားတွေးပြီး ပြောတာလေးက ချစ်စရာ ရယ်စရာလေး။ သူပြောတာလဲ ဟုတ်သားနော်။ အနားမှာရှိရင် ဖက်ပြီးမွှေးမွှေးပေးချင်စရာလေး။
runny nose မဟုတ်လား
သားသားက အရမ်း smart ပါလား။ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ အမတို့တော့ ပျင်းရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အိမ်နီးချင်း ဖြစ်ရင် ကောင်းမှာ..
သူငယ်ချင်းရေ .... သားလေးရဲ့ ဘာသာပြန်တွေက ရယ်ရတယ်နော် ... သူ့လိုတောင် တစ်ခါမှ မတွေးမိပါဘူး။ အမေလိုပဲ အတွေးတွေက တော်ချက်။ တို့သူငယ်ချင်း တံခါးကြီး (big door) ကို နှုတ်ဆက်ပါကြောင်း ပြောပေးနော် ...
တလောက အသိအိမ်သွားတော့ အသိသားလေးက တီဗီရှေ့မှာ။ သူတို့မိသားစု ထမင်းစားဖို့ ထမင်းစားပွဲဆီကိုလာဖို့ခေါ်တော့ ကလေးက အော်တယ်
ရီလည်းရီချင်တယ် ဒါပေမယ့် မရီခဲ့ဖူး။ သူတို့တွေ မြန်မာစကားပြောတာကို လှောင်ရီတယ်လို့ ခံစားမိပြီး ဆွံ့အသွားမှာစိုးလို့ပါ။
ကျနော်နဲ့ ခခ ကြားမှာကျတော့..
အမ သားက ချစ်ဖို့လည်းကောင်း ဉာဏ်လည်းကောင်းတယ်နော်။ အဲလိုဘာသာပြန်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တယ်မှတ်လို့...
အမအခုလိုလေးတွေ ရေးမှတ်ထားတာ နောက်ကျလို့ရှိရင် အမှတ်ရစရာလေးတွေဖြစ်နေမှာ...
အစ်မ တန်ခူးက Mrs. Big Door :D
အမေရိကားမှာ ကြီးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကတော့ သူ့မေမေကို "မေမေ အဲဒီ နှုတ်ခမ်းနီကြီး မဝတ်ပါနဲ့ဆို" လို့ ပြောတယ် ဆိုတယ်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသားကို တွေ့ဖူးချင်လိုက်တာ။
နောက်ဆိုရင် ဒီ့ထက် အများကြီး အများကြီး ကြားရပါလိမ့်အုံးမယ်...
သားသား အခု ဝတ်ထားတဲ့ အကျီ ဖြုတ်ထုတ်လိုက်တော့မယ်နော် တို့...
မေမေက ခြေချောင်းတွေမှာ နှုတ်ခမ်းနီတွေ သုတ်ထားတယ် တို့...
ဖွားဖွားက သားသားကို ရေချိုးပြီးတိုင်း သနပ်ခါး သုတ်ပေးတယ် တို့.......
တခါတခါကျ ရယ်ရမလို ငိုရမလိုပါ တန်ခူးရယ်.........
ခုကျ ပိုတောင် ရယ်စရာကောင်းသေး ဟိဟိ ရေသေးသေးလေးသောက်မယ်ဆိုတဲ့ သားသားက ခုတော့ အီးအီးတောင် ဖြေးဖြေးပါတယ်ဖြစ်ကုန်ပြီး ဒါမယ့် သူ့အရွယ်လေးနဲ့ ဘာသာ နှစ်ခုကြား ညှပ်နေတာ ဒီလောက်ပြောတတ်တာတောင် တော်လှပြီးး
သားသားရေ ဦးကိုမှတ်မိလားကွး)
ဟုတ်တယ် သူတို့ နားလည်သလိုတွေးပြီး ပြန်ပြောတာက တစ်ကယ်ကို ရယ်ချင်စရာ။
သမီးကတော့ စစ်ကိုင်းဘုရားတွေလည်ဖူးရင်း ဥမင် သုံးဆယ်ဘုရားဖူးပြီး အပေါ်ကအဆင်း မိသားစု ရေအိုးစင်နားမှာ ခဏ့နားကြတယ်။ အဲမှာ ကျမကမေးတယ် သမီးရေ ဘာတွေထပ်မြင်သေးလဲ မြင်တာတွေ ပြောပြပါ့အုံး ဆိုတော့ တောင်ကုန်ပေါ်ကနေ သူမြင်တာတွေပြောပြရှာတယ် ကျမက ဒါအကုန်ပဲလား သမီးဆိုတော့ သူက ပြောတယ် ကျန်သေးတယ်... ဦးဦးက ဂွေးသီးတွေ လိုက်ဖမ်းနေတယ်တဲ့... အမှန်တော့ ရေအိုးစင်က ဂွေးသီးပင်ကြီးရဲ့ အောက်မှာ သူ့ ရဲ့ ဦးလေးကလဲ တစ်ကယ်ကို ဂွေးသီးချူပြီး လိုက်ကောက်နေတဲ့အချိန်...
အမတန်ခူးရဲ့ သားသားက ဘာသာပြန် ရှယ်ပါလား။ မသင်ထားရသေးတဲ့ စကားလုံးတွေကိုရော ကိုယ့်ဖာသာ အဆန်းထွင် ပြောသေးလား။ ဥပမာ လက်ဒူးခေါင်း တို့(တံတောင်ဆစ်)၊ ခြေထောက်ဘုထွက်တို့ (ခြေ မျက်စိ)၊ ဆယ့်ခြောက်လ သမီးလေးရဲ့ မြန်မာစကား တွေ သူပြောလိုက်မှ ကိုယ်မူးသွားပြီး ခေါင်းနာနာ ဖြစ်သွားတယ် မျှဝေသွားတယ် အမတန်ခူးရေ...
If ur son can not speak Burmese,can he buddist for for his life?
ဘာသာရေး ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကော သေချာလေ့လာလိုက်စားပါသလား။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာပြန့်ပွားအောင် လုပ်ဖို့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို မြန်မာစကားတတ်အောင် သင်ဖို့ လိုအပ်ပါသလား။
မြန်မာစကား မပြောတတ်တာနဲ့ ဘာသာရေးကို ဘယ်လိုများ ဆက်စပ်တွေးခေါ်လိုက်ပါသလဲ။
ပို့စ်က ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ရိုးရိုးကို ရှုပ်ထွေးအောင် မလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
မသိလို့မေးတာဆိုရင်တော့ အပေါ်က မေးခွန်းတွေကို အရင် အဖြေရှာကြည့်စေချင်ပါတယ်
ကျွန်မမှာ နာမည် ရှိပါတယ်... ဒါပေမယ့် ရေးတဲ့သူက အမည်မသိနဲ့ လာရေးတော့ ကျွန်မကလဲ သူနဲ့ တန်ရာ တန်ရာ အမည်မသိ အနေနဲ့ပဲ ပြန်ရေးပါ့မယ်...
June 20, 2010 8:37 AM
ဒီအမည်မသိက မြန်မာစကားပြောတာနဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ ရောထွေးပစ်တာကိုး... မြန်မာစာ တတ်ရုံနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဖြစ်သလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဟာလဲ မြန်မာစာ တတ်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး... ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ ဖတ်စရာ မှတ်စရာ သိစရာ စာအုပ်စာတမ်း ကောင်းကောင်းတွေ အများကြီးရှိတယ် ဆိုတာရော သိပါရဲ့လား...
မသိဘူးဆိုရင် ဝေးဝေးမသွားပါနဲ့ စင်္ကာပူက အမည်မသိရေ... တိုပါးရိုးမှာရှိတဲ့ မြန်မာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားကြည့်ပါ... အဲဒီမှာ မြန်မာလို လုံးဝ မတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အန်တီကြီး အန်ကယ်ကြီးတွေရှိပါတယ်... သူတို့ကို မေးပါ... သူတို့ဆီမှာ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ ဘာသာရေး စာအုပ် တွေ ဓမ္မဒါန ပြုနေတာမို့ တအုပ်လောက် ယူလာပြီး ဖတ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်...
ဒီလိုဆိုရင် မြန်မာစာတတ်တာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ် မဖြစ်နဲ့ ဘာဆို ဘာမှမဆိုင်တာ သိသွားပါလိမ့်မယ်... လူတယောက်ဟာ မြန်မာစာ မြန်မာစကားတတ်မှ သူ့ဘဝမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ လုံးဝ လွဲမှားပါတယ်...။ ခေါင်းလေး နဲနဲသုံးပြီး စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်...
သူများကို တခုခု ထောက်ပြ ဝေဖန် ပြောဆိုချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဝမ်းစာပြည့်အောင် အရင်ဖြည့်ပြီးမှ လာခဲ့ပါ...။ နောက်တခုက ကိုယ်တိုင်က သူများကို မြန်မာစာ မြန်မာစကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ လက်ညှိုးထိုးလိုတဲ့သူ မြန်မာလူမျိုးတယောက်ဆိုရင် မြန်မာလို ရေးတတ်အောင် အရင် လေ့ကျင့်ခဲ့ပါအုံးလို့ မှာချင်ပါတယ်... ပြီးတော့ သတ္တိရှိရင် နာမည် အပြည့်အစုံနဲ့ ဆက်သွယ်ရန် မေးလ် အတိအကျနဲ့ လာခဲ့ပါ... ကြိုဆိုပါတယ်...။
တခုပြောချင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရုံဆိုရင်တော့ မြန်မာစာ မတတ်လဲရပါတယ်။ တကယ်တမ်း သေသေချာချာ လေ့လာချင်တယ်.. ထိထိရောက်ရောက် အားထုတ်ချင်တယ်ဆို မြန်မာစာတတ်သူက အများကြီးသာပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ ၀ိပသာနာအထွန်းကားဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်.ဗုဒ္ဓဘာသာ စာပေအရ ဘာပြန်ထားတာ တော်တော်များများ ရှိပေမဲ့ ရှုနည်းမှတ်နည်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို ဆရာတော်ကြီးတော်တွေရဲ့တရား ခွေကောင်း အကုန်လုံးကိုလည်း ဘယ်သူမှ ဘာသာမပြန်နိုင်ပါဘူး အင်္ဂလိပ်စာတတ် သာသနာပြုဆရာတော်ကြီးတွေ ကိုယ်တိုင် ဗမာလို ဟောတာပဲ အားရတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ 
သားသားဆီက ဘာသာပြန်သင်တန်း တက်သွားပါတယ်။